Shirweynaha 4-aad ee Xisbiga UCID. | Hargeysa World~Herald
Shirweynaha 4-aad ee Xisbiga UCID.
UncategorizedShirweynaha 4-aad ee Xisbiga UCID.
Shirwaynaha 4-aad Xisbiga Ucid ayaa ka socda Magaalada Hargeysa. Shirkan oo in muddo ah ba qabanqaabadiisu socotay waxa ay maanta ahayd shirweynihiisii.
waxaa ka soo qaybgalay ergooin badan oo ka kale yimi Gobolada somaliland iyo wadamada dunida. Shirweynahan ayaan lagu dooran doonaa dhammaan hoggaanka xisbiga hoggaamin doona. Guddoomiyaha, ku xigeenadiisa iyo Musharrax madaxweyne.
Shirweynahan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xubno ka socda Labada xisbi Qaran Kulmiye iyo Waddani.